Olana arivoarivo, mila olona arivoarivo… | NewsMada
Olana arivoarivo, mila olona arivoarivo…
“Ny arivo lahy tsy maty indray andro.” Teny filamatry ny tanànan’Antananarivo Renivohitra io. Tany amin’ny fiandohan’ny taonjato faha-XVII no nitondran’ny mpanjaka Andrianjaka, zana-dRalambo, arivo lahy haka an’Analamanga izay nanjakan’ny vazimba. Izay no nahatonga ny hoe tanàn’ny arivo… lahy tsy maty indray andro; eny, na tany amin’ny taompolo 1950 aza ny niandohan’io teny filamatra io.
Ankehitriny, amin’izao taonjato faha-XXI izao: mby aiza Antananarivo Renivohitra? Mihemotra ampolo taona, anjato taona… Arivoarivo ny olana amin’izao, nanaraka na nihoatra ny fitomboan’ny mponina. Ndeha hotanisaina lava eto ve? Ny tsy fandriampahalemana, ny fikorontanana, ny fahalotoana, ny tondradrano lava, ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny tsy fahampian’ny famatsian-drano sy jiro…
Manginy ny amin’ny fitantanana tsy hita be ihany hatramin’izay. Saika nibahan-toerana sy nomen-danja loatra tsinona ny lafiny politika? Niainga teto Antananarivo hatrany, ohatra, ny fiovana sy ny fanovana fitondrana tamin’ireo krizy politika lehibe nifandimby. Saingy, tsy mba niainga na hita soritra firy teto amin’ity hoe Renivohitr’i Madagasikara izay tena fampandrosoana haingana sy maharitra.
Mila fiovana sy fanovana amin’izay izao toe-javatra sy fotoana izao. Antananarivo tsy (ho) vita indray andro. Vao mainka ny hamahana ireo olana arivoarivo… mila olona arivoarivo. Tsy inona fa fanahapahan-kevitra mazava, fahasahiana mijoro, fandraisana andraikitra, firosoana tsy mijanona… Izany rehetra izany, ao anatin’ny ny fifampitokisana amin’ny firaisankina sy ny fifanomezan-tanana tanteraka sy feno.
Tsy efan’ny fitsitokotokoana sy fanavahan-tena noho ny firehana, fiaviana, finoana… Ny arivo lahy tokoa tsy maty indray andro. Mila porofoina amin’izay ny fiaraha-mijery sy manarina ny soa iombonana: ny mponina, ny tanàna, ny taranaka ho avy. Samy manana anjara amin’izany ny tsirairay: tsy misy tsy ilaina. Fotoana izao fifidianana ben’ny Tanàna izao, hanapahan-kevitra sy hirosoana.